ယုန်လေးကို အရေးမယူဖို့အတွက် မြင့်မြတ်တို့အဖွဲ့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသို့ သွားရောက်တောင်းပန် – Daily Feed MM
ယုန်လေးကို အရေးမယူဖို့အတွက် မြင့်မြတ်တို့အဖွဲ့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသို့ သွားရောက်တောင်းပန်
Admin_John | August 6, 2020 | Cele | No Comments
အဆိုတော်ယုန်လေးရဲ့ ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂယက်ရိုက်နေကြတာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးမြင်တွေ့ကြမှာပါနော်။သီချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေမရှိပေမယ့် MV သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ အပေါ်မှာ ဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိနေတာကြောင့် အ ဆိုတော်
ယုန်လေးကိုယ်တိုင် သူ့ဖေ့ဘုတ်ကနေပြီး စာနှင့်တစ်မျိုး Live လွှင့်ပြီးတစ်မျိုး ပရိသတ်ကြီးနှင့် အနုပညာရှင်တွေကို တောင်းပန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ဒီသီချင်း MV ရိုက်ကူးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကိုဗစ်စည်းကမ်းချက်တွေကို လိုက် နာမှုရှိ/မ
ရှိ စိစစ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်း သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်ဦးဆောင်ပြီး OG Crew တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ယုန်လေးအတွက် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ တောင်းပန်ပေးဖို့ ရောက်ရှိနေပြီလို့ ယုန်လေးက သူ့ရဲ့ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကနေ ဖော် ပြလာပါ
တယ်။“တော်တော်များများ အဆင်းဘီးတက်ပေးတဲ့ အချိန်မှာ မိတ်ဆွေ စစ် . အတု သိခွင့်ရလိမ့်ပါတယ် .ကိုအယ်ကြီး နှင့် ပါဝင်သူညီ ညီမငယ် အစ်ကို . အစ်မ . အမေမွှေး ဝိုင်းအားပေးသလို . မနေ့က ညနေ့က ည အထိ ကျွန်တော် အချစ် ဆုံးကောင်
မြင့်မြတ် . ပြီးတော့ ကိုခင်လိူင် . ထူးခြား . Kညီ .အတူရှိပေးကျတယ် . နှစ်သိမ့်ပေးကျတယ် .”“သူရူတင် နောက်ကျရင် နောက်ကျနိုင်တယ် .ရုပ်ရှင် အစည်းရုံးကို ကျွန်တော့် အတွက် တောင်းပန်ဖို့ ဆိုပြီး အခု မနက်အစောကြီး ထ ပြီး ကျွန်တော် ထက်
ဦးအောင် . မြင့်မြတ် ဦးဆောင်ပြီး OG Crew အကုန်ရောက်နေကျတယ် . ဒီလို မိသားစုတွေ ရှိတာကိုက အားအရမ်းရှိပါတယ် . Messenger ကေနေရာ . Ph နဲ့ ရော အားပေးတဲ့ အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်း ကျေးဇူး မမေ့ပါဘူး. ဘယ်လို စိတ်ခံစားမူ့ မျိုး
ကြုံမလဲ ဆိုတာ ခံစားဖူးတဲ့သူ . မိဘမရှိတဲ့ လူတိုင်း ဒီ သိမ်ငယ်အားငယ်စိတ်ကိုသိမှာပါ . မွေးထဲက မိဘနှစ်ပါး လုံးဆုံးတာပါ . ဘယ်ရဲမူးကြီးသား မှ မဟုတ်ပါဘူး ခင်များ . ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲပဲ ခံယူပါရစေ. ပါဝင်ပေ းသူ များ တစ်ာက်
နှင့်မှ မဆိုင်ပါ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏”ယုန်လေးကတော့ ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သူ့အတွက် မိတ်ဆွေ အစစ်အမှန်တွေကို သိခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူ့ကို အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ အယောက်စီတိုင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စကား
အဆိုေတာ္ယုန္ေလးရဲ႕ ငါတို႔အားလုံးရဲ႕ေျမ သီခ်င္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂယက္႐ိုက္ေနၾကတာကိုေတာ့ ပရိသတ္ႀကီးျမင္ေတြ႕ၾကမွာပါေနာ္။သီခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္မႈေတြမရွိေပမယ့္ MV သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အေပၚမွာ ေဝဖန္မႈေတြမ်ားစြာရွိေနတာေၾကာင့္ အ ဆိုေတာ္
ယုန္ေလးကိုယ္တိုင္ သူ႔ေဖ့ဘုတ္ကေနၿပီး စာႏွင့္တစ္မ်ိဳး Live လႊင့္ၿပီးတစ္မ်ိဳး ပရိသတ္ႀကီးႏွင့္ အႏုပညာရွင္ေတြကို ေတာင္းပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ဒီသီခ်င္း MV ႐ိုက္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုဗစ္စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို လိုက္ နာမႈရွိ/မ
ရွိ စိစစ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းမွာလည္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္ဦးေဆာင္ၿပီး OG Crew ေတြပါဝင္တဲ့အဖြဲ႕ဟာ ယုန္ေလးအတြက္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွာ ေတာင္းပန္ေပးဖို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီလို႔ ယုန္ေလးက သူ႔ရဲ႕ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကေန ေဖာ္ ျပလာပါ
တယ္။“ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဆင္းဘီးတက္ေပးတဲ့ အခ်ိန္မွာ မိတ္ေဆြ စစ္ . အတု သိခြင့္ရလိမ့္ပါတယ္ .ကိုအယ္ႀကီး ႏွင့္ ပါဝင္သူညီ ညီမငယ္ အစ္ကို . အစ္မ . အေမေမႊး ဝိုင္းအားေပးသလို . မေန႔က ညေန႔က ည အထိ ကြၽန္ေတာ္ အခ်စ္ ဆုံးေကာင္
ျမင့္ျမတ္ . ၿပီးေတာ့ ကိုခင္လိူင္ . ထူးျခား . Kညီ .အတူရွိေပးက်တယ္ . ႏွစ္သိမ့္ေပးက်တယ္ .”“သူ႐ူတင္ ေနာက္က်ရင္ ေနာက္က်ႏိုင္တယ္ .႐ုပ္ရွင္ အစည္း႐ုံးကို ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ ေတာင္းပန္ဖို႔ ဆိုၿပီး အခု မနက္အေစာႀကီး ထ ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ ထက္
ဦးေအာင္ . ျမင့္ျမတ္ ဦးေဆာင္ၿပီး OG Crew အကုန္ေရာက္ေနက်တယ္ . ဒီလို မိသားစုေတြ ရွိတာကိုက အားအရမ္းရွိပါတယ္ . Messenger ေကေနရာ . Ph နဲ႔ ေရာ အားေပးတဲ့ အေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကိုလည္း ေက်းဇူး မေမ့ပါဘူး. ဘယ္လို စိတ္ခံစားမူ႔ မ်ိဳး
ႀကဳံမလဲ ဆိုတာ ခံစားဖူးတဲ့သူ . မိဘမရွိတဲ့ လူတိုင္း ဒီ သိမ္ငယ္အားငယ္စိတ္ကိုသိမွာပါ . ေမြးထဲက မိဘႏွစ္ပါး လုံးဆုံးတာပါ . ဘယ္ရဲမူးႀကီးသား မွ မဟုတ္ပါဘူး ခင္မ်ား . ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ထဲပဲ ခံယူပါရေစ. ပါဝင္ေပ းသူ မ်ား တစ္ာက္
ႏွင့္မွ မဆိုင္ပါ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏”ယုန္ေလးကေတာ့ ဒီလိုအေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔အတြက္ မိတ္ေဆြ အစစ္အမွန္ေတြကို သိခြင့္ရခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သူ႔ကို အားေပးႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အေယာက္စီတိုင္းကိုလည္း ေက်းဇူးတင္စကား
လမ်းပေါ် ပန်းရောင်းနေတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ကိုဗစ် အကာကွယ်များ လှူဒါန်းမယ့် ဆီနွန်
ရွှေတိဂုံပုံရိပ်ကို ချနင်းပြီး ဖျော်ဖြေခဲ့လို့ ဝေဖန်မှုအပေါ် ဖြေရှင်းလာတဲ့ Project K အဖွဲ့
Live လွှင့် ဈေးရောင်းရင်း မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ အကယ်ဒမီ ထက်ထက်မိုးဦး
ဖုန်းအဟောင်းပြန်ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေ မဖြစ်မနေစစ်ပါ..